Sidee loo qoraa CV 2022 - Qaran Jobs - Somali Jobs
Home/Career Tips/Sidee loo qoraa CV 2022 – Qaran Jobs – Somali Jobs
Waxaa jira jagooyin kala duwan oo xafiiska dhexdiisa ah, waana muhiim in la helo codsi shaqo oo xoog leh markaad codsaneyso jago xafiis. Waxaa jira dhowr waxyaalood oo u baahan in lagu daboolo CV-ga shaqada xafiiska, oo ay ku jiraan waayo-aragnimadii hore ee jagada xafiiska, waxbarashada iyo xirfadaha. Maqaalkan, waxaan kaga hadli doona cidda abuuri doonta CV shaqo xafiis, waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu daro, sida loo qoro noocan codsigan shaqo ah iyo tusaale ku hagaya.
Kumaa abuuri kara ama qori kara CV-ga shaqo xafiis?
Shaqada xafiiska caadi ahaan waxaa loola jeedaa jago maamul, oo gudaha xafiiska dhexdiisa ah. Waxaa jira dhowr cinwaano shaqo oo kala duwan oo u baahan CV-ga shaqo xafiis markaad codsaneyso iyo kuwa ugu caansan cidda ay yihiin:
Kalkaaliyaha xafiiska faylka
Xiriiriyaha adeegga macaamiisha
Qaybaha CV-ga ee shaqada xafiiska
Kuwan soo socda ayaa kamid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu daro marka la qorayo codsiga shaqada ama booska xafiiska:
Macluumaadkaaga xiriirka:Ku darista macluumaadkaaga xiriirka ayaa muhiim u ah hubinta maamulaha shaqaalaynta ama shaqaaleeyaha ayaa kula soo xiriiri kara.
Taariikhda shaqada:Qeybtan codsiga shaqada waa halka aad ku dari doontid dhammaan khibradaha aad leedahay ee sida tooska ah ula xiriira shaqada. Waa inaad ku dartaa cabirro la cabirayo halka ay lagama maarmaan u yihiin iyo faahfaahin kaa taageeraya awooda aad u leedahay inaad ka soo baxdo mas’uuliyadaha shaqada aad codsaneyso
Xirfadaha:Inta badan shaqooyinka xafiiska dib ayaa loo soo celiyaa waxaa ku jira liis xirfadeed oo lagu darayo xirfadaha uu qofku leeyahay marka loo eego jagada uu dalbanayo.
Waxbarashada:Waa inaad ku dartaa waxbarashadaada rasmiga ah iyo waliba wixii shahaado ah, fasallo ama tababarro si toos ah ula xiriira jagada aad dalbaneysid.
Marka lagu daro waxyaabahan loo baahan yahay, waxaa jira qaybo kale oo aad jeclaan lahayd inaad ku darto CV-ga shaqadaada xafiiska. Waxyaabaha kale ee dheeriga ah ee la tixgelinayo waxaa ka mid ah:
Qoraal kooban: Qeybtaan ka mid ah codsiga shaqada ama CV-ga waxay bixineysaa dulmar guud oo ku saabsan xirfadahaaga iyo sida ay si gaar ah u buuxiyaan shuruudaha jagada.
Faahfaahinta aqoonta: Astaamaha u qalmiddu waa qayb ka mid ah codsigaaga shaqada oo tilmaamaysa dhammaan shahaadooyinka aad leedahay ee taageeraya awoodda aad u leedahay inaad qabato howlaha shaqada. Qaybtani caadi ahaan waa liistada xoogga saareysa ee xirfadahaaga iyo waayo-aragnimadaada maadaama ay la xiriiraan booska aad codsaneyso.
Hormarinta Xirfadeed: Qeybta horumarinta xirfadeed waxay ka koobnaan doontaa caddeyn kasta oo aad hayso oo shaqada ku habboon iyo xirfadaha aad rabto inaad sii horumariso iyo kuwaad horey usoo dhistay.
Abaalmarino: Haddii aad heshay abaalmarino ama waxqabadyo laxiriira shaqada aad codsaneysay, waxaa laga yaabaa inaad ku darto qeybta abaalmarinta si aad u muujiso kuwan.
Xiisaha iyo hiwaayadaha:Inkasta oo muhiimad wayn lahayn, hadana shirkadaha qaar waxay doorbidaan inay arkaan shaqsiga iyo xiisihiisa uu u hayo shaqadan ama ku qoran codsigooda shaqada iyada oo loo marayo qaybta xiisaha iyo hiwaayadaha. Hubso inaad ku darto xiisaha iyo hiwaayadaha oo u dhigma booska si uun loo dalbado.
Sidee Loo Qoraa CV
Kuwa soosocda waa talaabooyin laqaadayo markaad qoraysid CV-ga shaqo xafiis:
Akhriso liiska shaqooyinka
Kahor intaadan bilaabin qorista qoraalkaaga, waa inaad marka hore si fiican u aqriso liiska shaqada oo aad ku qortaa xirfadaha iyo masuuliyadaha ugu muhiimsan booska. Waxaad ubaahantahay inaad kudarto intaad kudhexjirtay si aad uga caawiso inaad ka dhex muuqato codsadayaasha oo aad tusto maamulaha shaqaalaynta inaad runti fahantay waxa shaqadu ka kooban tahay
Isu ururi macluumaadkaaga shakhsiyeed
Qeybta ugu sareysa ee codsigaaga shaqada adoo adeegsanaya astaamaha cinwaanka, ku dar dhammaan macluumaadkaaga xiriirka. Tani waa inay dabooshaa magacaaga oo dhan, cinwaankaaga, lambarka taleefankaaga iyo cinwaanka iimaylka ee aad inta badan isticmaasho. Waxa kale oo aad ku dari kartaa cinwaankaaga shaqo ee hadda joogto, haddii aad dareento inay tani si togan u taageeri doonto codsigaaga shaqada.
Qor astaantaada xirfadeed ama ujeeddadaada
Haddii aad rabto inaad ku darto ujeedo xirfadeed, waa inaad sidaas ku sameysaa bilowga shaqadaada. Tani waa inay shaqo-bixiyaha siisaa dulmar guud oo ku saabsan xirfadahaaga, waayo-aragnimadaada iyo aqoonta aad u leedahay jagadaas.
Abuur qaybtaada taariikhda shaqada
Marka xigta, ku qor qaybta taariikhdaada shaqada si isku xigxigta taariikh ahaan iyada oo laga bilaabayo booskaagii ugu dambeeyay. Ku dar cinwaanka shaqada, magaca shirkadda meesha aad ka shaqeysay, halka ay ku taal shirkaddu iyo taariikhaha aad ka soo shaqeysay. Sidoo kale waa inaad ku dartaa dhowr qodob oo muhiim ah kuwaas oo muujinaya waajibaadkaagi booskaas iyo wixii guul ah ee aad gaadhay intii aad halkaas ka shaqeyneysay.
Samee qaybta xirfadahaaga
Qaybta xigta ee codsigaaga shaqadu waa inuu ahaadaa qaybta xirfadaha. Halkan, waxaad ku dari doontaa faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan xirfadaha aad leedahay ee si toos ah ula xiriira booska aad codsaneyso. Tixgeli inaad isticmaasho liistada si aad xirfadahaaga ugu hayso qaab fudud oo loo akhriyi karo.
Ku dar waxbarashadaada
Haddii aad leedahay waxbarasho toos ah, ku dar tan qaybta waxbarashada ee codsigaaga shaqada. Ku dar magaca jaamacadda ama kulliyadda aad ka qalin badalatay, halka ay ku taallo, shahaadada aad qaadatay iyo muddada aad dhammaysay shahaadadaada. Waxa kale oo aad ku dari kartaa abaalmarino khuseeya, xubinnimo ama shaqo koorso kaa caawinaysa u qalmidaada booska aad codsanyso.
Ku dar qaybo dheeraad ah codsigaaga shaqada
Haddii aad rabto inaad ku darto qaybo dheeraad ah CV-ga shaqadaada xafiiska, sida qeybta xiisaha iyo hiwaayadaha ama qeybta abaalmarinta, ku samee dhamaadka CV-ga. Qaybahan ha koobnaadaan, kaliya ku dar macluumaadka la xiriira shaqada.
Tilmaamaha lagu abuurayo codsi shaqo oo waxtar leh
Waa kuwan talooyin dhawr ah oo mudan in maskaxda lagu hayo marka la qorayo codsiga shaqada jago xafiis:
Diirada saar khibradaada laxiriirta booska:Loo shaqeeyayaasha waxay rabaan inay arkaan inaad khibrad uleedahay gudashada waajibaadka booska aad codsaneyso, marka waa muhiim inaad xooga saarto khibradaada laxiriirta booskan aad codsanayso. Diirada saar khibrada iyo xirfadaha la wareejin karo oo isticmaal faahfaahin la qiyaasi karo markii ay suurtogal tahay.
Adeegso ficill:ficil u isticmaal sharraxaaddaada waayo-aragnimada shaqo ee hore, tani waxay abuuri kartaa dib-u-qancin iyo waxtar wax ku ool ah.ficilada aad ku muujin karto codsiga waxa ka mid noqon kara shaqo hore oo aad abuurtay, horumarisay, isku dhaftay, aad maareeysay, si fiican u qabatay, u diyaarisay sidii la rabay lagaana kormeeray oo lagugu siiyay abaalmarin.
Adeegso qaab codsi shaqo oo sida ugu habboon usoo bandhigaya khibradaada:Waxaa jira dhowr nooc oo kala duwan oo codsi shaqo ah, oo aad dooran karto inaad qorto. Kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah taariikhda, shaqeynta iyo isku-darka sida fiican loo muujiyay. Adeegso codsi shaqo oo si wanaagsan u xoojinaya aqoontaada shaqada. Tusaale ahaan, haddii aad leedahay waayo-aragnimo shaqo oo ku habboon, tixgeli inaad isticmaasho qaab-shaqeedka codsiga shaqada si aad diiradda u saarto xirfadahaaga iyo aqoontaada halkii aad ka heli lahayd ama xooga saari lahayd waxyaalo kale.
Shaxanka CV-ga Xafiiska shaqada
Tallaaboooyinka hoose waa kuwa ugu haboon ee la adeegsado marka la sameynayo codsiga shaqada xafiiska:
[Macluumaadka xiriirka: Ku dar magacaaga oo buuxa, cinwaankaaga, lambarka taleefankaaga iyo emaylkaaga.]
[Soo koobid ama ujeedo: Ku dar qoraal kooban oo ah aqoontaada iyo khibradaada laba ilaa saddex jumladood]
[Taariikhaha aad ka shaqeysay shirkaddo hore]
[Sharaxaadda waajibaadkaaga booskan
Sharaxaadda waajibaadkaaga booskan
Sharaxaadda waajibaadkaaga booskan]
[Ku dar sharaxaad kooban oo ku saabsan xirfad kasta oo aad leedahay oo la xiriirta shaqada aad dalbaneysid adiga oo qodobaynaya.]
[Magaca jaamacad ama jaamacadaad dhigato ama aad dhigatay]
[Cinwaanka shahaadada aad heshay]
Halkan waxa ah tusaale codsi shaqo oo lagu dalbanayo shaqo xafiis oo ku qoran luqada English maadaama codsiga shaqada badanaa lagu qoro luuqada English-ka
Waa kan sidii aad u qori lahayd cv-ga shaqada xafiisku;
Magacaaga oo saddaxan
December 2016 – April 2019
Managed office and sales support tasks
Oversaw accounts payable/receivable and payroll processing for company employees
Managed customer service questions, complaints and concerns
Scheduled meetings and travel for executive-level employees
Identified improvement potential in the employee handbook and worked with writers to revise the handbook
Trained new administrative employees
Bilkhayr Construction Co.
Coordinated with construction workers on various employee-related elements such as scheduling, paid time off and company policies
Assisted in the transition from paper invoices to a software-based program that increased organizational abilities
Oversaw payroll processing for company employees Skills
Procedure and policy modification
Gollis University, Hargeisa Somaliland